Uchichi kpu okpu
Ọkụ Agbarikọọla Otu Ụlọ n'Ụmụokpu Awka...
Ụlọ Ọrụ FRCN Enyela Obianọ Nkwanye Ùgwù Maka Nkwado Mgbasa Ozi...
Ụlọ ọrụ 'Federal Radio Corporation of Nigeria (FRCN)' a mààrà dịka 'Radio Nigeria' enyela aka na-achị steeti Anambra, bụ Gọvanọ Willie Obianọ nkwanye ùgwù maka ezi mmasị, ezi mmekọrịta na agbam mbọ ya n'ịkwalite ọrụ mgbasa ozi.
Ndị Ezinatọr Emee Ngagharị Iwe Banyere Óké Mbugharị Nhọpụta Ọchịchị...
Igbo sị na ọ na-abụ nwata chọkarịa ara, e nyeghị ya, o mee ụñàrà ka ọha obodo wee tinye ọnụ.
E Guzobe Anyachebelu Dịka Onye Jigodi Ọkwa Ọkaikpe Ukwu Steeti Anambra...
Owerre -Ezukala Emee Emume Ọkụka-Oriri Ji Ọhụụ, Chie Obianọ Echichi...
Ọñụ Adaa Dịka A Gbapere Ụlọ Ahụike Ọhụụ n'Ụmụdiọka...
Oke ọñụ dara nnọọ nso-nso a dịka a gbàpèrè ụlọ ahụike ọhụụ n'Ụmụdiọka dị n'okpuru ọchịchị Awka South na steeti Anambra.
Anambra Agbaala Ahọ Iri Abụọ Na Asatọ...
Taa ka steeti Anambra gbara ahọ iri abụọ na asatọ e jiri kee ya. Lee akụkọ ntọala na ihe ndị pụtakarịchara ìhè banyere ya bụ steeti.
SEMA Adụọla Ndị Bi n'Akụkụ Mmiri Ka Ha Dị Njikere Maka Ịgba Ọsọ Iju Mmiri...
N'ihi na ọ na-adị mma ịma ọkwà mmiri tupu ụbọchị ozùzo ya, a kpọkuola ma dụọ ndị bi na mpaghara ogbu mmiri ka ha mụrụ anya ka azụ ma dịkwa njikere maka ịkwagharị ọnọdụ oge adịghị anya, n'ihi ọkwà ahụ a na-ama bànyere iju mmriri nke a na-atụ anya na ọ ga-agba gwòògwò n'ahọ a.
Gịnị bụ ikpu okpu? Ikpu okpu bụ na mmadụ were okpu were kpuchie isi ya ka anwụ ghara ịma ya. Ma ọ bụ ka a ghara ịhụ isi nkwọcha ya. Ma ọ bụ iji chọ mma ka ụmụ nwanyị na-eje ụka n’ekpu okpu aga chọchị dịka ihe e ji achọ mma. Ha nyara n’olu, ha ọnyara na ntị; ma kekwa ịchafụ isi ma ọ bụ kpuru okpu dịka ndị isi ojii Amerika na-eme kwa ụbọchị ụka nile n’Ala Amerika.
Uchichi kpu okpu. Uchichi bụ okpu na-ekpuchi ihe. Uchichi na-ekpuchi ọnwa. Uchichi na-ekpuchi anyanwụ. Ọchịchị bụkwa uchichi n’asụsụ Igbo.
Ọchịchị gba, oke na enweta, ụsụ,na ikwighikwighi(Owl) apụta. Maka na anụ ndị na ahụ ụzọ ọfụma na abalị/uchichi, na ọchịchị. Itili/itiri agbala ooooooooooo!
Miri na-achọ izo, mgbe ụfọdụ ọ kpata/o buta itiri ịgba. E were ọkụ eletiriki dị ka ndị NEPA na-ewere ya n’ala Nigeria itiri agba ebe nine/ebe nile. Nke a na-eme ka ndị abalị dị m egwu kpagharịwa dịka oke na ewi ịchọ onye ha ga ezuru ihe ya. A na-akpọ ha ndị abalị dị egwu.
Ndị abalịdịegwu. Ndị oshi/ohi. Ndị oji abalị aga. Abalị agba aka.
Mana mgbe na-adịghị anya, ihe apụta, ọchịchị agbalaga. Ihe bịa ahụ ihe nile zoro ezo n’uchichi. Abalị dịkwa mma. Maka na e wezụga uchichi, ụmụ mmadụ akara na arahụ ụra ọfụma. Uchichi na Ehihe gbara ndụ. Ọchịchịrị dị mma ehihe dịkwa mma. O bu ihe emere na ya bụ ihe ga egosipụta mma na njọ ya bụ emume.